Best aromatherapy Lavender mmanụ dị mkpa mmanụ na-esi isi mmanụ ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | HaiRui
aromatherapy Lavender mmanụ dị mkpa Oil na-esi ísì ụtọ mmanụ
Ebube na-esi ísì ụtọ & isi
Ihe dị iche iche:
Flavour ụbọchị, ekpomeekpo nri, ụtaba ụtaba, flavour Industrial, ọgwụ, isi
Colorless ka ìhè ahịhịa mmiri mmiri
Fọrọ nke nta ka mkpụrụ osisi ụtọ topnote, ọhụrụ herbaceous
Ihe anaghị agbasa na mmiri, 95% Ethanol, DPG, DEP, White Oil
Steam Wepụ si na ifuru ọhụrụ na stalks
1 Net Wt. nke 50KGS / 180KGS na galọn GI Drums 2 Ahịa Ahịa Nhazi ma Bipute 3 Obere iwu nke 1kg, 2kg, 5kg na Alumiunm Bottle
Ọnụ ọgụgụ (Kilogram) 1 - 100 101 - 300 301 - 1000 > 1000
HaiRui Lavender Mmanụ Pharma ọkwa ọkwa CAS Nke 8000-28-0
Ọdịdị Colorless ka ìhè ahịhịa mmiri mmiri
Ike ndọda a kapịrị ọnụ
Ndepụta Refractive 20 Celsius c 1.459-1.469
Ebe mgbari 70 C
Na-agbaze Ihe anaghị agbasa na mmiri, 95% Ethanol, DPG, DEP, White Oil
Ọdịnaya Linalool 30%, Linalyl acetate 40%, Lavandulyl acetate na Lavandulol
Mmanụ Lavender …………………………………………………………………………………………….
Lavender mmanụ bụ ihe mkpa mmanụ nwetara site distillation site na ifuru spikes nke ụdị ụfọdụ nke lavender. Formsdị abụọ dị iche, mmanụ ifuru lavender, mmanụ na-enweghị ntụ, enweghị ike ịgbanye na mmiri, nwere njupụta nke 0.885g / mL; na mmanu mmanu mmanu kelevender, ihe-nkpuchi sitere na ahihiaLavandula latifolia, nwere njupụta 0.905g / mL.
Lavender mmanụ ifuru bụ aha nke Formkpụrụ Mba na British Pharmacopoeia. Dị ka mmanụ niile dị mkpa, ọ bụghị ihe dị ọchaonyinye; ọ bụ ngwakọta dị mgbagwoju anya nke sitere n'okikeọgwụ ọgwụ, gụnyere linalool na linalyl acetate.
Kashmir Lavender mmanụ bụ onye ama ama maka imepụta site na lavender na ugwu nke Himalayas. N'ihe banyere 2011, onye kachasi lavender mmanu n'uwa buBulgaria.
A pụkwara iji mmanụ lavender, nke dịworo ogologo oge na-eme ihe na-esi ísì ụtọ na mmanụ aromatherapy. Sì ahụ nwere mmetụta dị jụụ nke nwere ike inye aka na ntụrụndụ na Mbelata nchegbu na nchekasị. Lasea capsules nwere mmanu lavender nwere oke linalool na linalyl acetate, nke a na-akpọ Silexan Site na onye nrụpụta, a kwadoro ya dị ka onye na-echegbu onwe ya na Germany.Ọ masịrị a dabere na nchọta na capsules dị ka ihe dị obere na lorazepam.
Jiri ọgwụ ọzọ
Dị ka ndị na-akwado ọgwụ ọzọ si kwuo, enwere ike iji mmanụ lavender mee ihe dị ka antiseptik na ihe ngbu mgbu na-emetụta obere ọkụ na ahụhụ na ahụhụ.
A na-ekwukwa na ọ na-agwọ ọtụtụ ọrịa nkịtị, dị ka ntachu na anwụ anwụ. A pụkwara iji ya na ngwakọta mmanụ ịhịa aka n'ahụ, nke nwere ike ịdị irè na enyemaka nke nkwonkwo na mgbu mgbu, ma ọ bụ na ngwakọta akpati maka enyemaka nke ụkwara ume ọkụ na spasm bronchitic. A na-ekwukwa na ị ga-eji agwọ isi mgbe ejiri ya na ngwakọta ntutu, ma ọ bụ na ezigbo mbo iji kpochapụ nits.One ọmụmụ na-atụ aro itinye lavender mmanụ dị mkpa karịa povidone-iodine maka nlekọta ọnya episiotomy.
Na vitro, lavender mmanụ bụ cytotoxic nakwa dị ka photosensitizing. Otu nnyocha gosipụtara na mmanụ lavender bụ cytotoxic na sel anụ ahụ mmadụin vitro(mkpụrụ ndụ endothelial na fibroblasts) na ịta ahụhụ nke 0.25%. Linalool, ihe mejupụtara mmanụ lavender, gosipụtara ọrụ nke mmanụ dum, na-egosi na linalool nwere ike ịbụ akụkụ nke mmanụ lavender. Nsonaazụ nke ọmụmụ ọzọ gosiri na mmiri mmiri na-ebelata mkpụrụedemede mitotic, mana butere abromrations na chromosome na arụ ọrụ mitotic ma e jiri ya tụnyere njikwa, nke ukwuu. Mmiri mmiri na-ebute nkwụsị, nkwụsi ike, ntụgharị osisi na micronuclei. Ọzọkwa, mmetụta ndị a metụtara iji wepụ uche.
Otú ọ dị, dị ka nnyocha e mere na 2005 “ọ bụ ezie na a kọrọ na nso nso a na mmanụ lavender, na isi mejupụtara linalyl acetate, na-egbu egbu na mkpụrụ ndụ ụmụ mmadụ na vitro, kọntaktị dermatitis na mmanụ lavender na-egosi na ọ bụ naanị obere oge. Mgbanwe nke ọrịa a na-egbu egbu na ngwa ọgwụgwọ mmanụ mmanụ Lavandula ka bụ ihe edoghị anya.
N'ihe banyere phototoxicity, akụkọ nchọpụta 2007 sitere n'aka ndị na-eme nchọpụta na Europe kwuru na, "mmanụ lavender na mmanụ sandalwood emeghị ka fotohaemolysis dị n'usoro nnwale anyị. Otú ọ dị, e bipụtara akụkọ ole na ole banyere mmeghachi omume nke ihe na-akpali agụụ mmekọahụ n'ihi ihe ndị a, dị ka otu onye ọrịa nke na-anọgide na-enwu ọkụ ma na-eji ule sandalwood eme ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị. ”
A na-ejikwa mmanụ nke lavender na-acha odo odo mgbe ụfọdụ dị ka ihe mgbaze na eserese mmanụ, tumadi tupu ojiji nke turpentine distilled ghọrọ ihe a na-ahụkarị. Dị ka ihe atụ Francisco Pacheco kwuru banyere mmanụ lavender n'akwụkwọ ya "Arte de la pintura"
1. Obere iwu 1KG, 2KG, 5KG dị
2. Ihe nlele n'efu
3. Mpi price na magburu onwe mgbe-ire ọrụ
4. Kachasị Ahịa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Nke gara aga: Chọ Mma Isi Care moisturizer Aloe Vera Oil
Lavender mmanụ dị mkpa
Lavender na-esi ísì ụtọ mmanụ
Mmanụ Lavender Dị Ọcha
China Supplier Myrtle Oil mkpa mmanụ
N'ogbe N'ogbe Price Deep Brown Patchouli mmanụ F ...
Unicity Liquid chlorophyll maka ọgwụ na ọkwa
Ihe ndi ozo na ndi ozo di iche iche nke Linseed oi ...
Natural mọstad mmanụ nri N'ogbe